ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ လိုအပ်နေတဲ့အချက်များ
ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ ချယ်လ်ဆီး ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်များ
21 Oct 2018 . 4:44 PM
ဒီရာသီ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ လတ်တလောခြေစွမ်းနဲ့ ရလဒ်ပိုင်းကို ကြည့်ရင်တော့ အားရစရာလို့ပဲ ပြောရမယ်။ ရာသီအစ ကွန်မြူနတီဒိုင်းပွဲမှာ မန်စီးတီးကို ရှုံးခဲ့တာကလွဲရင် ကျန်တဲ့ အဓိကပြိုင်ပွဲတွေမှာ ရလဒ်ကောင်း ရယူထားပြီး ရှုံးပွဲမရှိအောင် ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။
ကွန်တီ Conte ခေတ်အလွန် ဆာရီ Sarri လက်ထက်မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်း တည်ငြိမ်လာပြီလို့ အကြမ်းဖျင်း သုံးသပ်လို့ရပေမယ့် တစ်ပွဲချင်းစီအနေအထားကို ကြည့်ရင်တော့ သိသာထင်ရှားတဲ့ အားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်။ အဲဒီအားနည်းချက်တွေထဲက တချို့ကို ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ သုံးသပ်ကြည့်ချင်ပါတယ် . . .
တိုက်စစ်မှာ ဟာဇက် Hazard တစ်ဦတည်း ရုန်းကန်နေရတာ
ပထမဆုံးဦးစားပေး ပြောရမယ့်အချက်ကတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်က ဟာဇက်တစ်ဦးတည်းအပေါ် လုံးလုံးလျားလျားကြီး တာဝန်ပုံကျနေတာပါပဲ။ ဒီယေဂိုကော်စတာ Diego Costa မရှိတော့ကတည်းက ချယ်လ်ဆီး တိုက်စစ်စွမ်းရည် ကျဆင်းသွားတာကို ပရိသတ်တွေ အသိပဲဖြစ်ပြီး တောင်ပံတိုက်စစ်တွေရဲ့ အားကြောင့်သာ သိသိသာသာ ပုံမပျက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟာဇက်ရဲ့Performance ကလည်း တစ်ရာသီထက် တစ်ရာသီ ပိုကောင်းလာလို့သာ ချယ်လ်ဆီး ခံသာနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဟာဇက်လည်း ပွဲတိုင်း ကောင်းဖို့ဆိုတာက သူဟာ မက်ဆီ Messi ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ မန်ယူနဲ့ပွဲမှာ ဟာဇက်ရဲ့ Solo Attacking တွေကို မန်ယူခံစစ်ကို အလုပ်ရှုပ်စေခဲ့ပြီး ဟာဇက် ကျသွားချိန်မှာ ချယ်လ်ဆီး တိုက်စစ် အသက်မဲ့သွားခဲ့တယ်။ အခု ချယ်လ်ဆီးရဲ့ အသက်သွေးကြောက ဟာဇက်ဆိုတာ ပြိုင်ဘက်တွေ အားလုံး သဘောပေါက်နေတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီး ဟာဇက်ကို Control လုပ်နိုင်ရင် ချယ်လ်ဆီး အဆိပ်မရှိတော့ပါဘူး။
Lone Strikers တွေ အားကိုးလို့ မရတာ
မိုရာတာ Morata ၊ ဂျရူး Giroud တို့ နှစ်ယောက်စလုံး အခုအထိ အလုပ်မဖြစ်သေးပါဘူး။ အဆိုးဆုံးက မိုရာတာပါပဲ။ သူ့ပုံစံက အခုမှ ဘောလုံး စကစားတဲ့ ချာတိတ်တစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတယ်။ တောင်ပံတိုက်စစ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်မှု အားနည်း၊ ကိုယ်တိုင်လည်း Skill မကောင်း၊ ခေါင်းတိုက်တာကလွဲပြီး ကျန်တာ ဘာမှ အရည်အသွေးမရှိတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးကို ဆာရီ ဘာလို့ နေရာပေးနေလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်အောင်ပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက ဘတ်ရှူအာယီ Michy Batshuayi ကို ကွန်တီရော၊ ဆာရီပါ ဘာလို့ မကြိုက်ကြတာလဲဆိုတာပါ။ ဒီနည်းပြနှစ်ဦးစလုံးက ဘတ်ရှူအာယီကို အငှားချဖို့ပဲ စဉ်းစားခဲ့တယ်။ ဘတ်ရှူအာယီရဲ့ခြေစွမ်းက အရမ်းကြီးကောင်းနေတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီယေဂိုကော်စတာလို တိုးအား၊ ရုန်းအားရှိပြီး Finishing ပိုင်းမှာသာ လိုအပ်ချက်ရှိနေတာပါ။ ဂျရူးက တိုးအား၊ ရုန်းအားကောင်းပေမယ့် Stamina ပိုင်း စကားပြောလာပြီး ပွဲချိန်ပြည့် သုံးဖို့ဆိုတာ အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။
ခံစစ်ကစားသမားတွေဆိုတာက Centre Backs တွေတင်မကဘဲ Defensive Midfielder တွေကိုပါ ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဇ် David Luiz ဟာ Typical Centre Backs မဟုတ်ဘဲ Libero ဆန်ဆန် ကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်လို့ ကွင်းလယ်အဖျက်နေရာနဲ့ ပိုသင့်တော်သူပါပဲ။ သူ့ကို Centre Back နေရာမှာ အသုံးပြုရင် အမှားများတတ်တာကို မော်ရင်ဟို Mourinho လက်ထက်မှာကတည်းက ပရိသတ်တွေ သတိပြုမိမှာပါ။ နောက်တစ်ချက်က ချယ်လ်ဆီးမှာ အရင်က အက်ဆီယန် Michael Essien လိုမျိုး Box-to-box midfielder ကောင်းကောင်း မရှိတော့တာပါပဲ။ ကွန်တေ Kante ၊ ယော်ဂျင်ဟို Jorginho တို့ဟာ တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါပံ့ပိုးမှု ကောင်းပေမယ့် ခံစစ်ကို ကူညီပေးနိုင်မှုမှာတော့ အားနည်းပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်အသင်း တိုက်စစ်ဆင်လာရင် Centre Backs တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိတာက ကွင်းလယ်အဖျက်တွေရဲ့ အားနည်းမှုကို ပေါ်လွင်စေတယ်။
ဆာရီရဲ့ ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ လူစားလဲမှု
ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ခန့်မှန်းရလွယ်စေတဲ့အချက်ထဲမှာ နည်းပြဆာရီရဲ့ ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ လူစားလဲမှုတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ မိုရာတာကို လူစားလဲရင် ၀င်မယ့်သူက ဂျရူးဆိုတာ အလွတ်ရနေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ လူစားလဲမှုတွေက Direct Change တွေ များနေပြီး Tactical Change တွေ သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲစုံမှာ အသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီး(ကွန်မြူနတီ)၊ အာဆင်နယ်(ပရီးမီးယားလိဂ်)၊ လီဗာပူးလ်(လိဂ်ဖလား/ပရီးမီးယားလိဂ်)၊ မန်ယူ (ပရီးမီးယားလိဂ်) တို့နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အာဆင်နယ် ပုံပျက်နေတဲ့အချိန်မှာ အသည်းအသန်ကစားပြီးမှ အနိုင်ရခဲ့ပြီး လိဂ်ဖလားမှာတော့ လီဗာပူးလ်ကို ဟာဇက်ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်အစွမ်းကြောင့် အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် အိမ်ကွင်းပွဲမှာ သရေကျခဲ့တယ်။ ရလဒ်အဆိုးကြီး မဟုတ်ပေမယ့် အားရစရာ အနေအထားတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာ မန်စီးတီးကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံကစားရမယ်။
နောက်တစ်ကျော့ကျရင် အာဆင်နယ်၊ လီဗာပူးလ်၊ မန်ယူ၊ မန်စီးတီးတို့ကို အဝေးကွင်းကစားရမှာဖြစ်လို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆု မျှော်လင့်ချက်အတွက် ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဦးမှာပါ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို အခုလောက်ဆို နည်းပြဆာရီလည်း သိထားလောက်ပါပြီ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ဆွတ်ခူးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆာရီအနေနဲ့ သူ့အသင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို အချိန်မီ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတော့တယ် . .
Photo:FOX Sports Asia,talkSPORT,Getty Images,Sports Illustrated,Goal.com
ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို စိနျချေါနိုငျဖို့ ခယျြလျဆီး ပွငျဆငျရမယျ့အခကျြမြား
ဒီရာသီ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ လတျတလောခွစှေမျးနဲ့ ရလဒျပိုငျးကို ကွညျ့ရငျတော့ အားရစရာလို့ပဲ ပွောရမယျ။ ရာသီအစ ကှနျမွူနတီဒိုငျးပှဲမှာ မနျစီးတီးကို ရှုံးခဲ့တာကလှဲရငျ ကနျြတဲ့ အဓိကပွိုငျပှဲတှမှော ရလဒျကောငျး ရယူထားပွီး ရှုံးပှဲမရှိအောငျ ကစားနိုငျခဲ့တယျ။
ကှနျတီ Conte ခတျေအလှနျ ဆာရီ Sarri လကျထကျမှာ ခယျြလျဆီးအသငျး တညျငွိမျလာပွီလို့ အကွမျးဖငျြး သုံးသပျလို့ရပမေယျ့ တဈပှဲခငျြးစီအနအေထားကို ကွညျ့ရငျတော့ သိသာထငျရှားတဲ့ အားနညျးခကျြတှရှေိနတေယျ။ အဲဒီအားနညျးခကျြတှထေဲက တခြို့ကို ကိုယျပိုငျအမွငျနဲ့ သုံးသပျကွညျ့ခငျြပါတယျ . . .
တိုကျစဈမှာ ဟာဇကျ Hazard တဈဦတညျး ရုနျးကနျနရေတာ
ပထမဆုံးဦးစားပေး ပွောရမယျ့အခကျြကတော့ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ တိုကျစဈက ဟာဇကျတဈဦးတညျးအပျေါ လုံးလုံးလြားလြားကွီး တာဝနျပုံကနြတောပါပဲ။ ဒီယဂေိုကျောစတာ Diego Costa မရှိတော့ကတညျးက ခယျြလျဆီး တိုကျစဈစှမျးရညျ ကဆြငျးသှားတာကို ပရိသတျတှေ အသိပဲဖွဈပွီး တောငျပံတိုကျစဈတှရေဲ့ အားကွောငျ့သာ သိသိသာသာ ပုံမပကျြသှားတာဖွဈပါတယျ။ ဟာဇကျရဲ့Performance ကလညျး တဈရာသီထကျ တဈရာသီ ပိုကောငျးလာလို့သာ ခယျြလျဆီး ခံသာနတောပါ။ ဒါပမေဲ့ ဟာဇကျလညျး ပှဲတိုငျး ကောငျးဖို့ဆိုတာက သူဟာ မကျဆီ Messi ၊ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo မဟုတျပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ မနျယူနဲ့ပှဲမှာ ဟာဇကျရဲ့ Solo Attacking တှကေို မနျယူခံစဈကို အလုပျရှုပျစခေဲ့ပွီး ဟာဇကျ ကသြှားခြိနျမှာ ခယျြလျဆီး တိုကျစဈ အသကျမဲ့သှားခဲ့တယျ။ အခု ခယျြလျဆီးရဲ့ အသကျသှေးကွောက ဟာဇကျဆိုတာ ပွိုငျဘကျတှေ အားလုံး သဘောပေါကျနတေဲ့အခကျြဖွဈပွီး ဟာဇကျကို Control လုပျနိုငျရငျ ခယျြလျဆီး အဆိပျမရှိတော့ပါဘူး။
Lone Strikers တှေ အားကိုးလို့ မရတာ
မိုရာတာ Morata ၊ ဂရြူး Giroud တို့ နှဈယောကျစလုံး အခုအထိ အလုပျမဖွဈသေးပါဘူး။ အဆိုးဆုံးက မိုရာတာပါပဲ။ သူ့ပုံစံက အခုမှ ဘောလုံး စကစားတဲ့ ခြာတိတျတဈယောကျလိုဖွဈနတေယျ။ တောငျပံတိုကျစဈတှနေဲ့ ခြိတျဆကျမှု အားနညျး၊ ကိုယျတိုငျလညျး Skill မကောငျး၊ ခေါငျးတိုကျတာကလှဲပွီး ကနျြတာ ဘာမှ အရညျအသှေးမရှိတဲ့ ကစားသမားတဈဦးကို ဆာရီ ဘာလို့ နရောပေးနလေဲဆိုတာ နားမလညျနိုငျအောငျပါပဲ။ နောကျတဈခုက ဘတျရှူအာယီ Michy Batshuayi ကို ကှနျတီရော၊ ဆာရီပါ ဘာလို့ မကွိုကျကွတာလဲဆိုတာပါ။ ဒီနညျးပွနှဈဦးစလုံးက ဘတျရှူအာယီကို အငှားခဖြို့ပဲ စဉျးစားခဲ့တယျ။ ဘတျရှူအာယီရဲ့ခွစှေမျးက အရမျးကွီးကောငျးနတော မဟုတျပမေယျ့ ဒီယဂေိုကျောစတာလို တိုးအား၊ ရုနျးအားရှိပွီး Finishing ပိုငျးမှာသာ လိုအပျခကျြရှိနတောပါ။ ဂရြူးက တိုးအား၊ ရုနျးအားကောငျးပမေယျ့ Stamina ပိုငျး စကားပွောလာပွီး ပှဲခြိနျပွညျ့ သုံးဖို့ဆိုတာ အကနျ့အသတျရှိပါတယျ။
ခံစဈကစားသမားတှဆေိုတာက Centre Backs တှတေငျမကဘဲ Defensive Midfielder တှကေိုပါ ဆိုလိုခငျြတာဖွဈပါတယျ။ ဒေးဗဈလူးဝဈဇျ David Luiz ဟာ Typical Centre Backs မဟုတျဘဲ Libero ဆနျဆနျ ကစားသမား တဈဦးဖွဈလို့ ကှငျးလယျအဖကျြနရောနဲ့ ပိုသငျ့တျောသူပါပဲ။ သူ့ကို Centre Back နရောမှာ အသုံးပွုရငျ အမှားမြားတတျတာကို မျောရငျဟို Mourinho လကျထကျမှာကတညျးက ပရိသတျတှေ သတိပွုမိမှာပါ။ နောကျတဈခကျြက ခယျြလျဆီးမှာ အရငျက အကျဆီယနျ Michael Essien လိုမြိုး Box-to-box midfielder ကောငျးကောငျး မရှိတော့တာပါပဲ။ ကှနျတေ Kante ၊ ယျောဂငျြဟို Jorginho တို့ဟာ တိုကျစဈကို လိုကျပါပံ့ပိုးမှု ကောငျးပမေယျ့ ခံစဈကို ကူညီပေးနိုငျမှုမှာတော့ အားနညျးပါတယျ။ ပွိုငျဘကျအသငျး တိုကျစဈဆငျလာရငျ Centre Backs တှနေဲ့ တိုကျရိုကျ ရငျဆိုငျရလရှေိ့တာက ကှငျးလယျအဖကျြတှရေဲ့ အားနညျးမှုကို ပျေါလှငျစတေယျ။
ဆာရီရဲ့ ရိုးရှငျးလှနျးတဲ့ လူစားလဲမှု
ခယျြလျဆီးအသငျးကို ခနျ့မှနျးရလှယျစတေဲ့အခကျြထဲမှာ နညျးပွဆာရီရဲ့ ရိုးရှငျးလှနျးတဲ့ လူစားလဲမှုတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။ ဥပမာ မိုရာတာကို လူစားလဲရငျ ဝငျမယျ့သူက ဂရြူးဆိုတာ အလှတျရနပေါပွီ။ သူ့ရဲ့ လူစားလဲမှုတှကေ Direct Change တှေ မြားနပွေီး Tactical Change တှေ သိပျမတှရေ့ပါဘူး။
ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ဒီရာသီ ပွိုငျပှဲစုံမှာ အသငျးကွီးတှဖွေဈတဲ့ မနျစီးတီး(ကှနျမွူနတီ)၊ အာဆငျနယျ(ပရီးမီးယားလိဂျ)၊ လီဗာပူးလျ(လိဂျဖလား/ပရီးမီးယားလိဂျ)၊ မနျယူ (ပရီးမီးယားလိဂျ) တို့နဲ့ ဆုံတှခေဲ့ပွီးပါပွီ။ အာဆငျနယျ ပုံပကျြနတေဲ့အခြိနျမှာ အသညျးအသနျကစားပွီးမှ အနိုငျရခဲ့ပွီး လိဂျဖလားမှာတော့ လီဗာပူးလျကို ဟာဇကျရဲ့ တဈကိုယျတျောအစှမျးကွောငျ့ အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ အိမျကှငျးပှဲမှာ သရကေခြဲ့တယျ။ ရလဒျအဆိုးကွီး မဟုတျပမေယျ့ အားရစရာ အနအေထားတော့ မဟုတျသေးဘူး။ လာမယျ့ဒီဇငျဘာလမှာ မနျစီးတီးကို အိမျကှငျးမှာ လကျခံကစားရမယျ။
နောကျတဈကြော့ကရြငျ အာဆငျနယျ၊ လီဗာပူးလျ၊ မနျယူ၊ မနျစီးတီးတို့ကို အဝေးကှငျးကစားရမှာဖွဈလို့ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆု မြှျောလငျ့ခကျြအတှကျ ကွီးမားတဲ့ စိနျချေါမှုနဲ့ ရငျဆိုငျရဦးမှာပါ။ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို အခုလောကျဆို နညျးပွဆာရီလညျး သိထားလောကျပါပွီ။ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို ဆှတျခူးခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဆာရီအနနေဲ့ သူ့အသငျးရဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို အခြိနျမီ ပွငျဆငျဖို့ လိုအပျနပွေီဖွဈပါတော့တယျ . .